देहताबाट ११० जना सवार जेट बिमान अफगानिस्तानमा दु’र्घटनाग्रस्त – साँचो खबर
देहताबाट ११० जना सवार जेट बिमान अफगानिस्तानमा दु’र्घटनाग्रस्त
देहताबाट ११० जना सवार जेट बिमान अफगानिस्तानमा दु’र्घटनाग्रस्त भएको छ। प्रान्तका स्थानीय अधिकारीहरुका अनुसार विमान काबुलको दक्षिण पश्‍चिममा दु’र्घटनाग्रस्त भएको हो। विमान देहातदेखि दिल्लीको लागि उडेको थियो। उक्त जहाजमा उड्ने वित्तिकै प्रावधिक समस्या देखिएका बताएकाे र कसरी दुर्घटना भयो भन्ने बारे अहिले नै एकिन नभएकाे अधिकारीहरू बताउँछन् । जेट विमान दुर्घटनाका अन्य कारणहरू पनि पत्ता लागिसकेकाे छैन ।
यसका साथै विमानमा केही प्राविधिक कठिनाइ आएपछि त्यहाको गजिनी जिल्लाको डेह याकमा दु’र्घटना भएको जनाइएको छ। दु’र्घटनाको थप विवरण आउन भने बाँकी छ। ताजा अपडेट हेर्दै गर्नुहाेला ।
टेलिभिजनले बिमानका सबै यात्रु सुरक्षित रहेको जनाएको छ । बिमानमै यात्रारत टेलिभिजनका पत्रकारले सडकमा बिमान अबतरण गर्नेक्रममा बिमानका पाङ्ग्राहरु फुटेको बताए । इरानी नागरिक उड्डयन संस्थाले बिमान दु’र्घटनाका बारेमा छानबिन शुरु गरिसकेको जनाएको छ ।
Previous: जीवनका सबै समस्याहरूलाई एक क्षणमा हटाउँन मन छ ? वास्तुशास्त्रमा उल्लेख गरिएका यस्ता छन् उपायहरू !
Next: प्रदेश १ मा आपराधिक घटनासँग सम्बन्धित दुई हजार एक सय सातवटा मुद्दा